လေ့လာမှု: လူငယ်အမျိုးသားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအမှုထမ်း (2015) များအနက်အင်္ဂါပုံရိပ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပူပန်နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ် - သင်၏ဦးနှောက် Porn တွင်
comments: အဆိုပါလေ့လာမှုက "ငယ်ရွယ်သောစစ်တပ်အရာရှိသုံးပုံတစ်ပုံကျော်သည် Erectile Dysfunction (ED) အဆင့်အချို့ကိုခံစားခဲ့ရကြောင်း" ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤထူးခြားသောမြင့်မားသော ED နှုန်းသည်နှင့်ကိုက်ညီသည် လုလင်တို့သည်အပေါ်အများအပြားကတခြားမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ။ ဒီလေ့လာမှုက“ အထီးလိင်အင်္ဂါဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုပုံရိပ်”၊ တစ်နည်းဆိုရသော်လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်မှုများသည် ED နှင့်အနည်းငယ်သက်ဆိုင်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည် porn-induced ED အတွက်အမှတ်အသားများဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဘုံသဘောကျမည်သူမဆို?
J ကိုလိင် Med ။ 2015 ဧပြီ 30 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12880 ။
Wilcox SL1, Redmond က S, Davis က TL.
ငယ်ရွယ်စစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များထက်ပိုတတိယ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ၏အချို့သောအဆင့်အထိကြုံနေရသတင်းပို့။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို, အထူးသဖြင့်လိင်အင်္ဂါတွေနဲ့အဆက်မပြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန် (SA) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများ (SFPs), အထူးသဖြင့်ပညာရေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မယ့်အာရုံဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကအထီးစစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအသက်အရွယ် 40 သို့မဟုတ်အငယ်တစ်နမူနာများတွင် (MGSI), SA နှင့်ပညာရေးအထီးလိင်အင်္ဂါ Self-image ကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုအကဲဖြတ်။
ဒေတာကိုစစ်တပ်ကလူဦးရေအတွက် SFPs အပေါ်ပိုကြီးတဲ့လေ့လာမှုကနေခဲ့ကြသည်။ ဒါကနမူနာ 367 အထီးစစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအသက်အရွယ် 40 သို့မဟုတ်အငယ်ပါဝင်သည်။ hierarchical ဆုတ်ယုတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ဖျန်ဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးဖြစ်စဉ်ကိုမော်ဒယ်တစ်ဦးအလယ်အလတ် variable ကိုအဖြစ်လုပ် SA နှင့်အတူပညာရေးအပေါ် MGSI ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့လုပ် SA MGSI နှင့်ပညာရေးအကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
ED ပြင်းထန်မှုဟာတွေနဲ့အကဲဖြတ်ခဲ့သည် Erectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း။ MGSI အဆိုပါ MGSI စကေးသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ SA အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များစကေး၏လုပ် SA subscale နှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
တွေးဆအဖြစ်, MGSI နှင့်အတူသာ။ ကြီးမြတ်စိတ်ကျေနပ်မှုသိသိသာသာနိမ့်လုပ် SA (F [8, 352] = 4.07, P ကို ​​= 0.001) နှင့်နိမ့် ED (F [8, 352] = 13.20, P ကို ​​= 0.001) ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ SA ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့် ED ၏နိမ့်အဆင့်ဆင့်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်း (F [8, 354] = 21.35, P <0.001) ။ ထို့အပြင်ရလဒ်များသည် SA မှတစ်ဆင့် ED သို့ MGSI ၏သိသာသောသွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည် (ခ = -0.07, standard error = 0.03, ယုံကြည်မှုကြားကာလ = [-0.14, -0.02], P <0.05), SA မှတစ်ဆင့် ED ပေါ်တွင် MGSI ၏ဖျန်ဖြေခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ ။
ဒီလေ့လာမှုက SFPs ၏ရှုပ်ထွေးသော etiologic အခြေခံ, အထူးသဖြင့်ပညာရေးအလေးပေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလုပ် SA နှင့် MGSI အဖြစ် ED မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှဝေသူ, စဉ်းစား၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ SA လျှော့ချရည်ရွယ်မဟာဗျူဟာငယ်ရွယ်စစ်တပ်လူဦးရေအတွက်ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နှင့် SFPs တိုးတက်စေကြောင်းမဟာဗျူဟာမှဖြည့်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ Wilcox SL, Redmond က S နှင့် Davis က TL ။ ငယ်ရွယ်အထီးစစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအကြားလိင်အင်္ဂါပုံရိပ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။